गायक भन्ने नै बिर्सिएजस्तो लाग्न थाल्यो – Nayadhar
गायक भन्ने नै बिर्सिएजस्तो लाग्न थाल्यो
बिहिबार, जेठ ०१, २०७७ | ११:१५:३८ |
पाल्पा। अवस्था सामान्य भैदिएको भए गायक पशुपति शर्मा के गर्दै हुन्थे? पक्कै स्टेज कार्यक्रम, गीत रेकर्डिङ वा सिर्जनामा व्यस्त हुन्थे। तर, लकडाउनका कारण उनी दुई महिनादेखि त्यसबाट टाढा छन्। स्टेजदेखि टाढा, रेकर्डिङदेखि टाढा, सिर्जनादेखि टाढा रहेर पशुपतिले कसरी दैनिकी बिताउँदैछन्? उनले आफ्नो दैनिकीसंगै लकडाउन अनुभव सुशिल नेपालसँग साटेका छन्।
लकडाउन नहुँदै सचेत थिए
केही जिल्लामा मेला–महोत्सव हुँदै थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको त्रास त्यति देखिएको थिएन्। त्यतिबेलै गायक पशुपतिले केही समयका लागि स्टेज कार्यक्रममा नहिँडने घोषणा गरिसकेका थिए। पछि सरकारले भीडभाडका कार्यक्रम नगर्न÷भीडभाडमा नआन आग्रह गर्यो। सोही समय कोरोना भाइरससम्बन्धि सचेतनामूलक गीत सार्वजनिक गरे। बाहिरी देशको अवस्था हेर्दा आफूहरु सचेत हुनुपर्ने औल्याए। पशुपतिले लख काटिसकेका थिए, लब लकडाउन हुन्छ। र, चैत ७ गते परिवारसहित घर स्याङ्जा लागे। नभन्दै ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा भयो। त्यसयता आफ्नो पुर्खौली थलो स्याङजामा छन् पशुपति।
अघिपछि चाहेर पनि परिवारसंग यसरी बस्ने अवसर कहाँ मिल्थ्यो पशुपतिलाई। गीत रेकर्डिङ्, छायाँकन, देश–विदेशका स्टेज कार्यक्रम, भेटघाट, अन्तर्वाता। सधै व्यस्त दैनिकी। चाडपर्वमा मात्रै घर आउने छोरोलाई आफूसंगै पाउँदा अहिले बुवाआमा दंग छन्। पशुपति पनि परिवारसंग खुःसी छन्, पारिवारिक वातावरणमा रमाईरहेका छन्। श्रीमती, बुवाआमालाई घरायसी काममा सघाउँछन्। कहिले आमासंग घाँस काट्न खरबारी पुगे। गीत गुनगुनाउँदै आमाछोरा घाँस काटे। कहिले तरकारी रोप्न बारीमा छिरे। टेलिफोन वार्तामा सुनाए, –‘करिअर बनाउन काठमाडौं जानुअघि गाउँमा जे–जे काम गर्थे। अहिले ति कामहरु गरिरहेको छु। पुराना दिनहरु ताजा भएका छन्। पुराना दिनमा फर्किएजस्तो लागेको छ।’
धेरैले लकडाउनमा फिल्म हेर्ने, पुस्तक पढने गरेको बताउँछन् । तर, पशुपतिलाई फिल्ममा उत्ति रुचि छैन्। बरु पुस्तक पढ्न रुचाउँछन्। ‘फिल्म १०÷१५ मिनेट हेरँे भने आत्तिन्छु। साहित्यिक पुस्तकहरु बोकेर ल्याउनुपर्ने, तर यति धेरै बन्द नहोला भनेर बोकिन्।’ अहिले गाउँमै पुस्तकहरु खोजिरहेको उनी बताउँछन्।